Warshad Soo Bandhigid Dhacdo | Shiinaha Soo-saareyaasha Alaabada Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
Daboolida Miiska la rakibay
Calanka Calaamadaha Caadiga ah
Marka la barbardhigo daboolida miiska caadada u ah, wareega miiska ee wareega leh wuxuu umuuqdaa mid aad ufiican. Ka sii muhiimsan, daboolka miiska wareega wuxuu si fiican ugu habboon yahay cabbirka miiskaaga. Kufiican munaasabadaha kaladuwan, iyadoon loo eegin waa bandhig ganacsi, xaflad ama olole ganacsi, miisaska sifiican loogu talagalay miisaska wareega miiska hubaal way kugu riyaaqi karaan.
Wareejinta miiska wareega wareega waa xulasho weyn oo ka dhigaysa miiskaaga dhacdada inay u ekaato mid fiiqan oo muuqaal leh. Sidoo kale, waxaa loo isticmaali karaa in laga ilaaliyo dusha miiskaaga duugista iyo jeexjeexa maalin kasta, gaar ahaan dib u noqoshada iyo dib u dhaca dhacdooyinka iyo bandhigyada ganacsiga.
La imanaya cabirro kala duwan, miisaska miisaska fidiya ee caadadu waa hab kharash-ku-ool ah oo lagu sameeyo bandhig miis soo jiidasho leh.
Ku habboon munaasabadaha suuqgeynta kala duwan, bandhigyada ganacsiga, iyo soosaarida wax soo saarka cusub, miiska caadada u ah orodku wuxuu sameyn karaa aragti qoto dheer oo xoog leh oo ku saabsan dadka "socda". Astaamaha daabacaaddaada iyo hal ku dhigyada miiska orodka, farriintaada muhiimka ah ayaa dadka ku gaareysa daqiiqado gudahood
Daboolka miiska caadiga ah ee la rakibay waa mid ka mid ah aaladaha dhiirrigelinta ee inta badan loo isticmaalo bandhigyada ganacsiga, bandhigyada ama bandhigyada. Iska ilaali daboolida miiska caadada kuu ah! Waad iskuduwaha ka dhigi kartaa muuqaalkaaga dabool miiska daabacan si saameyn muuqaal ah oo xoog leh u xirto macaamiisha suurtagalka ah uguna farxiso.
Daboolida Miiska Beddelaya
Daboolka miiska la beddeli karo ama la hagaajin karo ayaa ku habboon dhacdooyinka suuq-geynta kala duwan, bandhigyada, bandhigyada ganacsiga iyo inbadan. Iyada oo leh miis qurxoon oo la beddeli karo, waxaad heli doontaa laba xayeysiis oo kala duwan oo dhiirrigelin ah, maaddaama miiska la tuurayo aan laga beddeli karin oo keliya 8ft tuuro illaa 6ft tuurid laakiin sidoo kale laga tuuro 8ft ilaa 6ft daboolka la rakibay.
Nooca miiska la tuuro ama miiska daboolkiisu waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee soo ururinta dharka miiska ee badanaa loo isticmaalo bandhigyada ganacsiga, bandhigyada ama bandhigyada. Naqshadeynta fudud iyo goynta nadiifka ah ayaa caan ku ah in badan oo show-goers ah. Haddii aad rabto inaad soo bandhigto astaantaada ama astaantaada, 3-dhinac caadooyinka daabacan ee daabacan hubaal waa xulashadaada ugu fiican.
Teendhada daarta, oo sidoo kale loo yaqaan marquee iyo gazebo, waa aalad si ballaadhan loo xayaysiiyo. Soo bandhigida cabbirka daabacaadda ballaaran iyo qaab muuqaal ahaaneed, xayeysiisyada teendhooyinka xayeysiinta ayaa dhab ahaantii ah habka ugu waxtarka badan ee kaa dhigaya inaad ka soo dhex baxdo dadka, iyada oo aan loo eegin munaasabadaha gudaha iyo waxqabadyada bannaanka, sida bandhigyada ganacsiga, xafladaha, dhacdooyinka cayaaraha ama dhacdooyinka ganacsiga dibadda.
10 × 20 Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gaarka ah
Ku qalabeysan yahay jir teendho tayo sare leh, teendhooyinkayada xayeysiinta ah waxay damaanad qaadi karaan xasilloonida xitaa qaar ka mid ah cimilada yar ee dabaylaha wata Ku habboon dhammaan noocyada adeegsiga gudaha iyo dibedda, haddii ay tahay bandhig ganacsi, bandhig, dhacdo isboorti ama soosaaris cusub. Ka sokow, bacda shaagagga ee sida gaarka ah loo qaabeeyey waxay ka dhigaysaa xirmada teendhada mid ku habboon in lagu wareego.
10 × 10 Teendhada Xayeysiinta Midab Buuran La daabacay
Teendhada xayeysiinta 10 × 10 ama taambuugga kor u kaca waa mid ka mid ah xalka ugu caansan ee lagu soo bandhigo ku dhowaad dhammaan noocyada dhacdooyinka iyo waxqabadyada.
Teendhada korkeeda waa la daabacay oo la tolay 600D Polyester. Sublimation dheehkeena daabacan dusha sare ee teendhada ayaa xaqiijin kara inaad midab hufan oo qallafsan leh. Haddii aad rabto inaad ka mid ahaato meelaha ganacsiga lagu soo bandhigo, waxaad xaqiiqdii u baahan tahay teendho xayeysiin u gaar ah.